प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०६:०१
ढोरपाटन नगरपालिका बुर्तिबाङमा अक्सिजन सहितको १० वेड आइसोलेसन तयार गरिएको छ । कोरोना संक्रमित विरामीहरुको उपचारका लागि तयार पारिएको आइसोलेशनमा कोरोना संक्रमण भई अक्सिजन लगाउनुपर्ने विरामीहरुको उपचार सुरु गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. मिलन मल्लले बताउनुभयो ।
‘अक्सिजन सहितको आइसोलेशन निर्माणमा गरिदै थियो । समस्या भएका संक्रमित स्वास्थ्य केन्द्रमा आएपछि, इमेरजेन्सि कक्षमा सुरक्षित गरि कन्सनट्रेटरबाट अक्सिजन दिइएको डा. मल्लले बताउनुभयो । हिजोमात्र आइसोलेसनमा अक्सिजन सहितका १० वेड तयार भए, हामीले त्यहाँ राखेर उपचार सुरु गरेका छौं । मल्लले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा साना ठ्रुला गरेर २० थान अक्सिजन सिलिन्डर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुखले आफ्नो नीजि खर्चमा खरिद गरिएका ३० थान सिलिन्डर एक दुई दिनमा स्वास्थ्य केन्द्रमा आउँदैछन् । ५ वटा अक्सिजन कन्सनट्रेटर समेत तयारी अवस्था रहेको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ ।
यत्ति तयारीले नपुग्ने अवस्था रहन सक्छ भन्दै डा. मल्लले तत्कालका लागि भएको यत्ति तयारीले केही विरामीहरुको उपचार सुरु गरेका छौं । तर अझै तयारी राम्रो गर्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।